Simika biolojika, volom-borona, fanamafisana hafanana - Teknolojia vaovao momba ny angovo Shuiyuan
Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2000, miorina ao amin'ny faritanin'i Shandong, izahay no mpanamboatra orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana Dibenzoylmethane (DBM) sy furfural. Amin'ny maha-famokarana matihanina lehibe indrindra an'izao tontolo izao an'i Dibenzoylmethane (DBM) manana tanjaka isan-taona 10.000 metric taonina, ho iray amin'ireo mpamokatra matihanina lehibe indrindra manerantany manana 30.000 metric taonina isan-taona.
Izahay dia manizingizina ny kalitaon'ny vokatra amin'ny voalohany ary manara-maso tsara ny kalitaon'ny vokatra isaky ny dingana.
Ny orinasanay dia nitombo ka lasa mpanamboatra mari-pahaizana dibenzoylmethane sy furfural.
Niorina tamin'ny taona 2000, izahay dia mpanamboatra orinasa manokana momba ny famokarana Dibenzoylmethane (DBM) sy ny furfural.
Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2000, miorina ao amin'ny faritanin'i Shandong, izahay no mpanamboatra orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana Dibenzoylmethane (DBM) sy furfural.
Furfural compound compound Furfural (C4H3O-CHO), antsoina koa hoe 2-furaldehyde, mpikambana fantatry ny fianakaviana furan ary loharanon'ny volom-borona manan-danja hafa. Rano tsy misy loko io (teboka mangotraka 161.7 ° C; hery misintona 1.1598) ...
Inona no atao hoe volony? KC BRUNING Furfural dia simika vita amin'ny zavatra biolojika izay novokarina ho an'ny tanjona indostrialy. Izy io dia voaforon'ny vokatra azo avy amin'ny fambolena toy ny hodi-kazo, volom-boankazo, kitapom-bary, ary valala. Ny sasany amin'ireo p ...